ग्राण्डी अस्पतालमा सिओपिडी प्याकेज।
ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले यही जनवरी महिनाको १६ तारिख अर्थात माघ २ गतेदेखी दुई किसिमका सिओपिडी प्याकेज अघि सारेको छ ।
पहिलो प्याकेज अन्तर्गत मात्र रु. २०००/- दुइहजार रुपैंयामा चेष्ट एक्स-रे,इसिजि,लङ्स फङ्सन टेस्ट,सिबिसी,ब्लड सुगर,क्रियाटिनिन,पोटासियम तथा चिकित्सकसँगको परामर्श गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।
दोश्रो प्याकेज अन्तर्गत रु. ५,०००/- पाँचहजार रुपैंयामा चेष्ट एक्स-रे,इसिजि,लङ्स फङ्सन टेस्ट,सिबिसी,ब्लड सुगर,क्रियाटिनिन,पोटासियम,बोन मिनरल डेन्सिटोमेट्री (बिएमडी) तथा चिकित्सकसँगको परामर्श गर्न सकिने ब्यवस्था छ ।
#GIH #COPDPackage #PreventiveHealthCheckUp